Hayadaha ka shaqa gala Somalia waxay si toos ah u tagaan xeryaha ay ku jiraan dadka ku bara kacay dhulkooda oo loo yaqaan "internally displaced peoples" dadkaas u badan haween iyo caruur oo ah kuwa rafaadkan aan dhamaan uu si aad ah u taabtay.
Dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxaa la arkay Telefishino cusub oo Somalida ay hawada soo geliyeen,kuwaasoo isugu jira kuwa ganacsi ah iyo qaar afka dowladaha ay u adeegaan ku hadla,laakiin waxay isaga mid yihiin arimo cusub oo aan hore loo arag "LACAG URUURIN MASAAJID LAGU DHISO AMA DAD TABAALEYSAN LOO URURIYO",runtii waa arin aad u fiican oo ah wax la qabto kuwa ugu wanaagsan,iyadoo xiliga bisha barakeysan ee RAMADAANKA habeen walba lacag urur ay socoto,iyadoo la soo fadhiisyo CULIMO duco iyo lacag uruurin qibrad u leh.
Waqtiyada kale waxaa lacagaha dadka qurba joogta u badan lag uruuriyaa habeenada JIMCAHA ah,taasoo labada xili ka dhigeysa waqti dadka Somalida ee naxariista badan si toos ah wax looga heli karo.
Hadii aan kala saarno labadan arin ee lacagaha lagu guro,ugu horeyn waxaan aragnaa in ay mar walba ay leeyihiin waxaa MASAAJID cusub laga dhisayaa magaalooyinka UK iyo YURUB,wadanka boqortooyada Ingiriiska waxaa ku nool qowmiyado aad u farabadan oo MUSLIM,tusaale ahaan magaalooyinka LONDON,MANCHESTER ama BIRMINGHAM waxaad ka dhisan boqolaal masaajid oo qof walba uu ku tukan karo,masaajidna waa GURIGGA ILAAHAY cid laga xigana ma jirto,su'aashu waa yaa lacag uruurin mudan MASAAJID iyo AGOON ama MAATO Somalia ku haligan?
Waxaan aragnaa in Telefishinada Somalida ay inta badan lacag u ururiyaan MASAAJID laga dhisayo wadamada YURUB,iyagoo isticmaala ereyada IIBSO BOOSKAAGA JANADA,taasoo dadka aragooda yar yahay si fudud lacag looga qaado,tabcan MASJID la dhiso wax ka fiican ma jiro,laakiin wax walba kala horeyn ayay leeyihiin.
Tusaalaha hoose aan isla eegno:
VIDEO 1: waa masaajid la yiri waxaa laga dhisayaa xaafada ugu Somalida badan ee LONDON oo la yiraahdo BRENT.
Xaafadan BRENT oo SOMALIDA ugu badan tahay waxaa ka dhisan18 MASJID oo qof walba loo ogolyahay in uu ku tukado - RIIX LINKIGA HOOSE:
VIDEO 2: Iminka daawo dhibaatada ay ku jirto HOOYO Somaliyeed oo JOWHAR ku nool!
Qofkii wax garadka ah diinta Islaamkana wax ka kasaya go'aankiisa wuxuu noqonayaa in HOOYADA rafaadkan uu haysto ay ka horeyso MASAAJID YURUB lagu dhiso,sababtu waa dadka qurba joogta ah ma la'a meel ay ku tukadaan,laakiin ISLAANTA waayeelka ah nafteeda ayaa halis ku jirta.
Telefishinada tabcan waxaa loo furay qaab ganacsi, lacagaha ay uruuriyaan uma sameeyaan SOMALI jaceel iyo naxariistii oo ka badatay,WARIYAHA barnaamijka daadihinaya lacag ayuu ku leeyahay waxyaabaha ay ururiyaan,telefishinka wax buu ka jaranayaa,wadaadka duceynaya qeyb ayuu ka qaataa.
Lacagaha noocaa lagu uruuriyo waa halis,sababtuna waa XISAAB iyo waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo ACCOUNTABILITY ma jirto,qofkii ILAAH ka baqaya keliya ayaa iska ilaaliya in lacag AGOON ama MASAAJID loogu tala galay ay ku tagto.
Waxaan soo ogaanay in TELEFISHINO qaarkood ay afka marsadaan lacagaha sadaqada ku soo gaarta.
Tan kale masaajidyada UK dhulka loo iibiyo kan ugu yar wuxuu ku dhow yahay 1 MALYUUN lacagta ISTARLIINKA ah,taasoo u dhiganta 1.7 MALYUUN DOOLAR,dhulka waxaa lagu soo iibiyaa waxa loo yaqaan MORTGAGE oo ah lacag si toos ah looga deensado BANGIYADA iyo shirkadaha amaahda bixiya,taasoo mar walba ay RIBO dul saaran tahay,ma dhici karto BANGI UK ku yaala xitaa haduu uu yahay kuwa ISLAAMIGA ah in lacag bilaash ah oo aan faa'iido ka helayn in ay ku siin karaan.
Ururinta lacagaha waxay noqdeen GANACSI ama BUSINESS, ma jiraan dad si daacad ah umadda saboolka ah wax ugu qabta? HAA,laakiin waxaa la ilooway "MUDNAANTA ama PRIORITY"
Shaqsiga MUSLIMKA lacag uu si daacad ah u diray ajarkeeda marwalba wuu leeyahay,laakiin lacagtaada sida xalaasha ah aad ku heshay in meeshii loogu tala galay aan gaarin oo qof kale jeebka uu gashto waa wax aan la qaadan karin.
Hadii xaalka sidan uu yahay yaa la aamini karaa? jawaabtu aad ayay u fududahay, tusaale ahaan eeg sawirka hoose iyo sidii loo gacan qabtay HOOYO FAADUMO oo JOWHAR ku nool
Waa qaab cusub oo masaakiinta iyo dhismayaasha masaajidyada wax loogu qaban karo,iyadoo 1 qof ama dad badan ay mas'uul ka yihiin oo meel walba oo lacagta ay ku baxdo si CAD oo HUFAN ama TRANSPARENT ah loo helayo,laakiin lacagtaada hadii ay gacanta u gasho meel GANACSI ah, waxaa hubaal ah in sidii loogu tala galay aan loo isticmaalin.
Qoraalkeyga waxaan ku soo af-jarayaa in dadkii hore u bixiyay lacagihii MALAAYIINTA ahaa iyo DAHABKII ee TELEFISHINADA looga xaabiyay ay weydiiyaan dadka ka masuulka ah in ay u sheegaan meelihii ay u gudbiyeen,waxaa hubaal ah in ay meelo qaarkood oo SOMALIA ah lacag loo diray oo VIDEO yar laga soo duubay taasi micnaheeda ma ahan in wixii ay qabteen oo dhan ay wada gudbiyeen,waxaana xusuus mudan in wixii lacag ah ee aad u xawishay TELEFISHINADA SOMALIA aad u dirtay si FII SABIILILAH ah,laakiin dadka aad ku aamintay aan ahayn adiga oo kale.